केका लागि जाने स्कुल? :: Setopati
अमेरिकी शिक्षाविद जोन हल्ट भन्छन् 'स्कुल इज् ब्याड फर चिल्ड्रेन।' उनको मान्यता छ की स्कुलहरु विद्यार्थीको शोषण गर्ने संस्था हुन्, उनीहरुका लागि खतरनाक जेल सरह हुन्।
विस्टन चर्चिलको भनाई छ 'आइ एम् अलवयेज् रेडी टु लर्न बट आइ डन्ट लाइक टु वी टट्।' अर्थात्, पढाइ भनेको आफ्नो लागि आफूले गर्ने कुरा हो, कसैले आफ्नो लागि गरिदिने कुरा होइन। तर स्कुलमा पढाइको परिभाषा गर्दै भनिन्छ, हामीले तिमीलाई पढाउने हो, हामीले पढाएनौँ भने तिमी सिक्न सक्दैनौ।
'द फियर अफ गड इज द बिगिनिङ अफ विज्डम' भन्ने मध्यकालीन सिद्धान्त जुन चर्चले आफू शक्तिशाली बन्न प्रचार गरेको थियो, त्यसैको छायाँलाई हाम्रा स्कुलहरुले आजसम्म अनुकरण गर्दै आएका छन्। किनकी हाम्रा शिक्षक र विद्यालय पनि त्यस्तै शक्तिशाली छन्। जहाँ जिज्ञासा राख्नेभन्दा शिक्षकसँग डराएर खुरुखुरु अह्राएको मान्ने ‘यस म्यान’ बनाउन स्कुलहरु लागि परेको देखिन्छ।
'के आउँछ जान्न उसका शिक्षकहरुलाई मतलब थिएन, उनीहरु त उसलाई के-के आउँदैन भन्ने मात्र पत्ता लगाउन चाहन्थे।' विन्स्टन चर्चिलको यो भनाइ आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परीक्षा के आउँदैन भन्ने कुरा मात्र पत्ता लगाउने साधन हो। उसलाई के आउँछ? भन्नेसँग यहाँ कसैलाई पनि मतलब छैन।
आत्मविश्वासले भरिएको एउटा बच्चालाई स्कुलहरुले क्षणभरमै हीनताबोधी बनाउँछन्। स्कुलमा बच्चाहरुले आफू र आफ्नाप्रतिको विश्वास नै गुमाउँछ किनकी स्कुलले भन्छ- आजसम्म पनि तिमीले केही सिकेकै छैनौ, हामी जे पढाउँछौ त्यो नै सिकाइ हो।
त्यसैगरी निर्धारित पाठ्यक्रम पढिसकेपछि उसले सोच्छ- राम्राराम्रा कृति लेख्ने, नवीन आविष्कार गर्ने वा साहसिक कार्य गर्न सक्ने त विदेशीहरु मात्र हुन्। नेपालीहरुले सक्दैनन्। जसले गर्दा ऊभित्र ‘म सक्दिनँ’ भन्ने भाव पैदा हुन्छ। किनकी उसले ‘म्याकेभिलि’ पढ्छ, ‘चाणक्य’ पढ्दैन। अझ अपौरुषीय मानिने वेद लगायतका अन्य पूर्वीय ग्रन्थको परिचय पाउन पनि सक्दैन।
त्यसैले होला, फलानोको छोराले महिनामा यति कमाउँछको आधारमा मात्र व्यक्तिको सफलताको मापन गर्छ समाजले! समाजमा भौतिक सुखलाई मात्र सर्वोपरि मान्ने र आत्मिक सुखको नाम निसानै नजान्ने जमातको उत्पादन शिक्षाले गरिरहेको छ। त्यसै भएर कविशिरोमणि लेखनाथले 'त वर्गका अन्तिम वर्ण खाली, पढी दुइटा बन भाग्यशाली' भनेजस्तै पढ्ने भनेकै पैसा कमाउन हो भन्ने समाजिक मानसिकता बढिरहेको छ।
जसले गर्दा नयाँ बाटो खन्न होइन, खनिसकेको बाटोमा घस्रिन हामीहरु तल्लीन छौँ। नयाँ खोज, अनुसन्धान, जानकारी, चिन्तन, मनन गर्नुसँग हाम्रो शिक्षाको गोरु बेचेको पनि साइनो देखिँदैन। हिन्दीमा कहावत छ- 'जब शिक्षाका मक्सद नोकरी होता हैं तो समाजमें नोकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं'।
दोस्रो विश्व युद्धपछि तहसनहस भएको जापानले प्रविधिसँग सम्बन्धित करिब ४० हजार पुस्तकहरुको अनुवाद आफ्नो भाषामा गर्‍यो र छिट्टै युद्धको पीडा र घाउलाई पुर्दै विश्वको एक महाशक्ति बन्न पुग्यो। चीन त्यस्तै गर्दैछ। उनीहरु आफ्नै पनमा रमाइरहेका छन्, आफ्नै भाषा र संस्कतिमा कटिबद्ध छन् भने हामीले किन नसक्ने?
आइन्सटाइन भन्छन्- ‘एजुकेसन इज ह्वाट रिमेन्स आफ्टर हि ह्याज फर्गटन एभ्रिथिङ हि लन्र्ड इन् स्कुल।' अर्थात् हामीले पढेको सबै बिर्सिसकेपछि जे बच्छ त्यो नै यथार्थ शिक्षा हो। त्यति पर पनि जानु पर्दैन। पास भएको भोलिपल्ट पढेको के कति सम्झन्छौँ त? एकपटक आफैँलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गरौँ।
चिनियाँ उखान छ- ह्वाट आई हियर आई फर्गेट, ह्वाट आइ सि आई रिमेम्बर, ह्वाट आई डु आई लर्न। हामीमा अझै पनि लर्निङ बाइ डुइङको सिस्टम विकसित भएको छैन। हामी सिकाउनभन्दा रटाउन व्यस्त छौँ। नर्सरीमा पढ्ने मेरो सानो भान्जो भन्छ- ‘ए फर एप्पल’। म भन्नु ‘ ए फर एन्ट...’ तर ऊ ए फर एप्पलबाट टसमस हुँदैन। यसरी स्कुलले पहिलो कदमबाट नै पट्टी लगाइदिन्छ र भन्छ-‘हामीले देखाएको बाटोमा हिँड्नु नै पढाइ हो’।
'थाहा छैन?' मैले अचम्मित हुँदै भनेँ।
‘मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित’ मैले भनेँ तर उनले चिनेनन्। म तीन छक् परेँ। बुझाउने कोशिस गरेँ तर उनले बुझेनन्, बुझ्न नचाहँदै भने- ‘कताको मरिसकेको नेता रहेछन् छोडिदिउँ, मलाई के मतलब?'